Baidoa Media Center » Qarax ismiidaamin ah oo goor dhow ka dhacay Nairobi.(Sawiro)
Qarax ismiidaamin ah oo goor dhow ka dhacay Nairobi.(Sawiro)
August 3, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Qarax xoogan oo loo maleynayo inuu yahay ismiidaamin ayaa goor dhow ka dhacay magaalada Nairobi gaar ahaan xaafada Soomaalida ku badantahay ee Islii.
Qaraxa ayaa lala beegsaday garoon diyaaradeed oo ay leeyihiin ciidamada cirka dalka Kenya.
Garoonka oo magaciisu yahay Moi air base ayuu naftii huraha isku qarxiyay irida hore ee garoonkaas ayada oo ay inta badan adeegsadaan garoonkaas ciidamada dowlada Kenya ee qaybta ka ah ciidamada AMISOM.
Ilaa iyo hada waxaa la hubaa inuu qaraxaas ku geeriyooday ninkii fuliyay ismiidaaminta ayada oo ay sidoo kalena tiro dad Soomaali u badana ku dhaawacmeen maadaama wadooyinka garoonka u dhow dhow ay dadka Soomaalida aad u adeegsadaan.
Goobta uu qaraxa ismiidaaminta ahi ka dhacay ayaa waxaa soo buux dhaafshay ciidamada amaanka magaalada Nairobi.
Xafiiska war qabadka ee baidoamedia, Nairobi, Kenya.